Mac အတွက်အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်: အဓိပ္ပါယ်လမ်းညွှန် | ငါက Mac ကပါ
Mac အတွက်အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည် - ပြတ်သားတဲ့လမ်းညွှန်
Juan Colilla | | Mac ကွန်ပျူတာများ, လဲ tutorial
Mac များအရှိန်အဟုန်မြင့်တက်လာသည်။ လူများကသူတို့ကို ၀ ယ်လာသည်။ များသောအားဖြင့်လူအများအပြားကအဲဒါကိုလုပ်ကြသည်။ ၂၀၀၈ နှင့် ၂၀၁၂ ကြားနှစ်များမှ Mac များ၊ ယနေ့ခေတ်တွင်ပင်စစ်ပွဲများစွာပြုလုပ်နိုင်သောကွန်ပျူတာများ။ သင်သည်သူတို့ကိုအနည်းငယ်တွန်းအားပေးရန်ရှိသည်.
ဤလမ်းညွှန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောအရာများကိုသင်ပြပါလိမ့်မည် သင်၏ "Old" Mac ကို update လုပ်ပါ ဟာ့ဒ်ဝဲ software ကိုအတူလိုက်ပါနိုင်ပြီးသူတို့မရှိကြပါဘူး နောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ်များကိုမနာလိုရန်ဘာမျှမကျွန်ုပ်တို့၏ Mac သည်အသုံး ၀ င်သောသက်တမ်းရှည်စေရန် hardware ကိုမည်သို့ထိန်းသိမ်းရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်အကြံဥာဏ်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်၊ သင်သံသယမဝင်သေးသောကန့်သတ်ချက်များအထိသင်၏ကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှုကိုမြှင့်တင်ပေးမည့်အဓိကအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်မည်။
2 ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုထိကြည့်ရအောင်၊ ငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲ
2.1 မင်း Mac ကနှေးနေလား SSD တပ်ဆင်ကြည့်ရအောင်
2.1.1 ၁။ HDD ကို SSD ဖြင့်အစားထိုးပါ။
2.1.2 ၂။ SSHD ကိုသုံးပါ
2.1.3 ၁။ အဓိက Bay တွင် SSD တစ်ခုနှင့် HDD ကို Data Doubler တွင်တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်လုပ် Fusion Drive ပြုလုပ်နိုင်သည်။
2.1.4 ၂။ Mister Spock ကွေးနေသောမြန်နှုန်း၊ RAID 2
2.1.5 ၃ ။ အခုအိမ်မှာမရှိတဲ့ဆရာဝန် RAID3။
2.2 သင်၏ Mac သည်အလွယ်တကူရေနစ်နိုင်သလား။ အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အချိန်
2.3 အကယ်၍ သင်သည်ဂိမ်းကစားသူတစ်ယောက်နှင့် MacBook Pro ရှိပါက၎င်းကို desktop ကွန်ပျူတာသို့ပြောင်းလိုက်သည်မဟုတ်လား။
3 ပိုကောင်းအောင် software
3.1 ၁။ OnyX
3.2 2. Qihoo 360 လုံခြုံရေး
3.3 ၃။ Disk Sensei
3.4 ၄။ AppCleaner
4 software ကိုအဆင့်မြှင့်
ဤလမ်းညွှန်သည် Mac ရှိသူများအားလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။ သင့်တွင် Mac အဟောင်းရှိပါကသင့်အားခွင့်ပြုမည့်အစိတ်အပိုင်းများလမ်းညွှန်ကိုတွေ့နိုင်သည် သင်၏အဖွဲ့အားဘဝသစ်တစ်ခုပေးပါအကယ်၍ သင်ဟာသက်တမ်းအရင့်ဆုံးဖြစ်သော်လည်းနောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ်လ်မဟုတ်တဲ့မက်တွေရှိမယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုနောက်ဆုံးပေါ်အမြင့်မှာနေရာချပေးနိုင်မယ့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာထဲမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးမယ့်ဆော့ဝဲလ်အချို့ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင်သင်သည်နောင်လာနောက်မျိုးဆက် Macs ကိုဂုဏ်ယူစွာပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်လျှင်သင်၏အရင်းအမြစ်များကိုချဲ့ထွင်ရန်နှင့်သင်၏အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေမည့်ဆော့ဖ်ဝဲအားလုံးထက်သင်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
တိုတောင်းခုနှစ်, ဤလမ်းညွှန်သည် Mac ပိုင်ဆိုင်သူအားလုံးအတွက်ဖြစ်သည် (အကယ်၍ ၎င်းသည် OS X El Capitan နှင့် ပို၍ သဟဇာတဖြစ်ပါက) ။
အဟောင်းနှင့်သိပ်မဟောင်းသေးသော Mac များ (Pros, iMacs, Minis နှင့် MacBooks) သည်အချို့သောအဆင့်မြှင့်တင်မှုကိုခွင့်ပြုထားသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အလွယ်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းများမှာသိုလှောင် drives များ, RAM module များ၊ optical drives နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အားဘဝအသစ်ကိုပေးနိုင်သော OS X ရှိအစိတ်အပိုင်းများ အသင်းသစ်တစ်ခု၏ကုန်ကျစရိတ်ထက်များစွာသေးငယ်သည့်ပမာဏကိုဖြုန်းတီးခြင်း.
မင်း Mac ကနှေးနေလား SSD တပ်ဆင်ကြည့်ရအောင်
သင်၏ Mac သည် system ကိုစတင်ရန်နှင့် application များကိုဖွင့်ရန်အချိန်များစွာကြာလျှင် (ငါမင်းကိုနားလည်တယ်၊ အပြီးတိုင်ယူလိမ့်မည်) အကယ်၍ SSD အသစ်တစ်ခုအတွက်သင်၏သမားရိုးကျ hard drive (HDD ဟုလည်းခေါ်သည်) ကိုပြောင်းလဲရန်အချိန်ရောက်လာပြီ၊ ဤနေရာတွင်သတိပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်၏ကွန်ပျူတာသည် SATA ကိရိယာကိုသာထောက်ပံ့သည်ဆိုလျှင် (၎င်းတွင် CD ဖတ်ရန်မလိုပါသို့မဟုတ်၎င်းကိုသင်ဖယ်ရှားလိုမည်မဟုတ်ဟုဆိုလိုသည်) ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည်။
၁။ HDD ကို SSD ဖြင့်အစားထိုးပါ။
အားသာချက်များ: အမြန်နှုန်းအသစ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုသူများ၊ developer များသို့မဟုတ်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာများ၊ သို့မဟုတ်သင်သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုပိုမိုစိတ် ၀ င်စားသူ Corsair SSD ဖြစ်လျှင်အခြား World Computing မှ SSD တစ်ခုအားအကြံပြုလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုနှင့်ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်း။
SSD တစ်ခုနှင့်သင်၏အဖွဲ့ဖြစ်သည် စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းစတင်ပါလိမ့်မည် ၎င်းကိုသင်မသိမီ application များကိုဖွင့်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ပရောဂျက်များ၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းမျက်နှာပြင်များနှင့်အံ့သြဖွယ်အမြန်နှုန်းဖြင့် 6Gb / s အမြန်နှုန်းဖြင့်ဖိုင်များကိုရွေ့လျားပါလိမ့်မည်။ ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များကြောင့်သင့်တွင်ကွန်ပျူတာအသစ်ရှိကြောင်းသင်ယုံကြည်စေမည်။
အားနည်းချက်များကို: စွမ်းဆောင်ရည်ကြီးမားသော SSD သည်“ စျေးကြီး” နိုင်သည်။ သင် 240GB တစ်ခုလိုချင်လျှင်ဈေးနှုန်းများကိုယူရို ၁၀၀ မှယူရို ၁၄၀ အကြားတွင်ရှာနိုင်သည်။ Corsair နဲ့ OWC ကိုအကြံပေးပါ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့ကိုက်ညီအောင်သက်သေပြခဲ့တဲ့အမှတ်တံဆိပ်တွေပေါ့။ အကယ်၍ သင်သည်စျေးပေါသောအစိတ်အပိုင်းများကိုယူပါကအလားတူကတိပေးမည်ဖြစ်သော်လည်း၊ 3GB / s သို့ရောက်ရှိသောအလွန်တိုတောင်းသောအသုံး ၀ င်သည့်ဘဝသို့မဟုတ်ပြmanyနာများစွာပေးသော SSD များကိုသင်ရှာနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ယနေ့သင်ပေးသောအရာသည်မနက်ဖြန်ကိုကယ်တင်လိမ့်မည်။
OWC မာကျူရီ Electra 6G
၂။ SSHD ကိုသုံးပါ
အားသာချက်များ: ဒီ disk သည် Fusion Drive နှင့်ဆင်တူသည်။ ၎င်းသည်စနစ် (OS) သိမ်းဆည်းထားသောအတွင်း၌ NAND Flash memory အနည်းငယ်နှင့်အတူသမားရိုးကျ HDD တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို disk များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အကောင်းဆုံး SSD (အမြန်နှုန်း) နှင့်အကောင်းဆုံးတွင်ရှိသည်။ 100DB သိုလှောင်မှုအတွက်ယူရို ၁၀၀ ဖြစ်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းဖြင့် HDD (စွမ်းရည်) ။
Boot တက်လိမ့်မယ် နီးပါးအဖြစ်အစာရှောင်ခြင်းသိုမဟုတ် SSD နှင့် application များ၏အဖွင့်သည် HDD ထက်အနည်းငယ်ပိုမြန်လိမ့်မည်။
အားနည်းချက်များကို: NAND Flash မှ 8GB ကိုတွေ့နိုင်သည်။ ကြွင်းသော HDD မှာမူ HDD ထက်များစွာသာသည်။ SSD တစ်ခု၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပါ အရာအားလုံးကိုအပြည့်အဝအမြန်နှုန်းဖြင့်လည်ပတ်ရန်နေရာများစွာရှိသည်။
သင့်ကွန်ပျူတာတွင် SuperDrive ယူနစ်တစ်ခုရှိပြီးသင်၎င်းကိုအသုံးမပြုလျှင် SSD + Data Doubler pack ကိုကျွန်ုပ်အမြင်အရအကောင်းဆုံးရွေးချယ်နိုင်သည်။
၁။ အဓိက Bay တွင် SSD တစ်ခုနှင့် HDD ကို Data Doubler တွင်တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်လုပ် Fusion Drive ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အားသာချက်များ: အိမ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သိုလှောင်မှုစနစ် (၂) ခုကိုပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားရွေးချယ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည် တစ်ခုချင်းစီမှာဘယ်လောက်သိုလှောင်ချင်သလဲဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် 60GB SSD ကိုအဓိကတစ်ခုအဖြစ်နှင့် 2TB HDD ကိုအလယ်တန်းအဖြစ်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့သည် 60GB SSD အတွက်နည်းပါးပြီး၊ 2TB HDD အတွက်အများအပြားကကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သောပေါင်းစပ်မှုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ အများဆုံး။
အားနည်းချက်များကို: ကုန်ကျစရိတ်များပြားသည်၊ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သော SSD များသည်သိသိသာသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်သည် (60GB တစ်ခုလျှင်စျေးပေါနိုင်သည်။ ) adapter ကိုဝယ်ကြလော့ (၎င်းတို့သည် OWC တွင်ရောင်းချပြီး ၄ င်းတို့၏အထူးလျှော့စျေး SSD များနှင့်အတူအထုပ်များပါ ၀ င်သည်) သင်လုပ်ရန်လိုသည် CD player ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုလိုပါက USB မှတဆင့်ချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ပြင်ပ adapter တစ်ခုအတွက်ယူရို ၂၀ ခန့်ပေးရမည်။
အိမ်လုပ် Fusion Drive ဖန်တီးရန်ညွှန်ကြားချက်များ -
ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု - ပထမ ဦး စွာ OS X ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းတွင် USB တပ်ဆင်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ရမည်။ ၎င်းကိုကူးယူရန် AppStore ရှိ GET ကို နှိပ်၍ Alt ကိုနှိပ်ပါ USB ဖန်တီးရန် DiskMakerX ကိုအသုံးပြုပါ, disk နှစ်ခုကို format လုပ်တော့မယ့်အချိန်မှာ Data Machine ကိုကော်ပီလုပ်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်။
Mac ကိုပိတ်ပြီး disks များကိုသူတို့နေရာတွင်ထည့်ပြီးတာနဲ့ Mac ကိုဖွင့်ပြီး start selector ပေါ်လာသည်အထိ Alt ကိုသော့ခတ်ထားပါ။ ထိုနေရာမှ USB install ကိုရွေးပြီး၎င်းကို load ရန်စောင့်သည်။
ဘာမှမတပ်ဆင်မီ“ Utilities” အပိုင်းသို့ သွား၍“ Terminal” ကိုဖွင့်ပါ။
terminal တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါကုဒ်များကိုအစီအစဉ်တကျရေးသည် -
1. diskutil စာရင်း (ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် "/ dev / disk1" စတိုင်တွင်ပြသမည့် SSD နှင့် HDD ၏သတ်မှတ်ချက်များကိုရှာဖွေရမည်။ )
2. diskutil cs Fusion diskX diskY ဖန်တီးပါ (diskX တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် SSD ယူနစ်နှင့် disk ကိုဒစ်ဒီ၏အမှတ်အသားကိုရိုက်ရမည်။ )
3. diskutil CS စာရင်း (၎င်းသည်ဖန်တီးထားသော Fusion Drive အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုပြလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Logical Volume Group ၏ဘေးတွင်ပေါ်လာသောအမှတ်အသားကိုရေးရမည်။ )
4. createvolume cs diskutil (ယခင်ညွှန်ပြသောအမှတ်အသား) jhfs + Fusion 100%
ဤအဆင့်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ Fusion Drive ကိုဖန်တီးပြီးသားဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက် Disk Utility သို့ သွား၍ ဤယူနစ်ရှိစနစ်တပ်ဆင်ခြင်းကိုဆက်လုပ်ပါ။ ၎င်းတွင် Time Machine ၏မိတ္တူကိုမည်သည့်ပြwithoutနာမှမရှိပြန်ယူနိုင်သည်။
၂။ Mister Spock ကွေးနေသောမြန်နှုန်း၊ RAID 2
အားသာချက်များ: RAID0system သည် disk နှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းပြီး data တစ်ခုလုံးကိုတစ်ချိန်တည်းမှာရေးခြင်းနှင့်ဖတ်ခြင်းနှင့်ဖတ်ခြင်းများကိုပေါင်းစပ်ပေးတယ်။ နှစ် ဦး စလုံး discs တွေကိုများ၏စွမ်းရည်နှင့်မြန်နှုန်းကဆက်ပြောသည်နေကြသည် စာဖတ်နှုန်းမြန်နှုန်း ၁.၂ GB / s အထိရောက်ရှိနိုင်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည် (Gb နှင့်မရောထွေးရန်၊ 1GB သည်ညီမျှသည် 2MB, 1Gb သည် 1024MB) သို့ရောက်ရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါကဤအမြန်နှုန်းသည်အသုံးဝင်လိမ့်မည် ကြီးမားတဲ့ volume ဖိုင်များ.
အားနည်းချက်များကို: RAID0ကိုအသုံးပြုရန်တူညီသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အမြန်နှုန်းနှစ်ခုတူညီသောကိရိယာနှစ်ခုလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းအားအမှတ်တံဆိပ်နှင့်မော်ဒယ်တစ်မျိုးတည်းကိုသာအသုံးပြုရန်အကြံပြုလိုသည်။
ဒါပေမယ့်ဒါကမပြီးဆုံးသေးဘူး။ HDD နဲ့ SSD ကိုဖိတ်လို့မရဘူး စနစ်နှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီး၎င်းတို့နှစ်ခုကိုအသုံးပြုပါHDDs ၂ ခုကိုသုံးမယ်ဆိုရင် 2MB / s နှုန်းမြန်လိမ့်မယ်။ OWC SSDs ၂ ခုနဲ့ဆိုရင် ၁,၂၀၀MB / s ခန့်ဖတ်မယ်၊ ရေးရမယ်။ SSDs ကိုသုံးချင်ရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတော်အတန်များတယ်။ အကယ်၍ 160GB ရှိရင် SSD နှစ်ခုကို 2GB တစ်ခုစီဝယ်သင့်တယ်။
၎င်းသည်မလုံလောက်ပါက RAID2တွင်0ခုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားရရှိစေသည် ဒေတာကိုဆုံးရှုံးနှစ်ကြိမ်အခွင့်အလမ်းဆိုလိုသည်မှာဒေတာကိုပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးအကြားဖြန့်ဝေသည်။ အကယ်၍ တစ်ခုမှမအောင်မြင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ဒေတာ၏ထက်ဝက်သာကျန်တော့သည်။ သို့သော်ပုံပေါ်နိုင်သည့်ထက် ၀ က်မဟုတ်ပါ၊
မော်ဒယ်တူအဆင့်တူ disk နှစ်ခုကိုတပ်ဆင်ထားသည်။
OS X တပ်ဆင်သည့် USB မှ Mac ကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်သည်။
«diskutil appleRAID stripe stripe [RAID0ကိုပေးချင်သောအမည်] JHFS + disk0 disk1«
၃ ။ အခုအိမ်မှာမရှိတဲ့ဆရာဝန် RAID3။
အားသာချက်များ: RAID 1 စနစ်သည်သိုလှောင်ရေးကိရိယာနှစ်ခုသုံးပြီးစနစ်သည်အတူတူပင်ကူးယူပါလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာဖိုင်တစ်ခုသည်ရှိပြီးသား disk တစ်ခုစီအတွက် ၁ ကြိမ်ကူးလိမ့်မည်။ disk တစ်လုံးသေလျှင်၊ ဒေတာအားလုံးပါသောအခြား disk တစ်ခုရှိသည် ပျက်စီးသွားသော disk ကိုကျွန်ုပ်တို့အစားထိုးခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းသည်စနစ်သည် disk မှဒေတာအားလုံးကိုကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင်ကူးယူနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းစနစ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ system ပျက်ကွက်သည့်အခွင့်အလမ်းများကိုထက်ဝက်လျှော့ချသောကြောင့်မည်သည့်ဖိုင်မျှမဆုံးရှုံးရန်သေချာသည် (စက်နှစ်ခုလုံးသည်တစ်ချိန်တည်းပျက်ကွက်လျှင်အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မည်) ။ သတိထားပါ၊ ၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်အခြား malware များမှကာကွယ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ ၎င်းစက်နှစ်ခုလုံးကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ကူးစက်နိုင်သည်ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အလွန်စပ်စုသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အားနည်းချက်များကို: ငါဘယ်ကစ ၎င်းသည် malware ကူးစက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်၊ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်အမြန်နှုန်းများကိုမထည့်သွင်းနိုင်ပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်2SSDs 240GB ရှိလျှင် 560MB / s ရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည် 240GB ကိုအမြန်နှုန်း 560MB / s နှုန်းဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ မလိုအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ် တူညီသောအကျိုးကျေးဇူးများအတွက်နှစ်ဆပေးချေခြင်း (ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များ၏လုံခြုံရေးကိုတိုးမြှင့်ခြင်းမှအပ) ။
RAID 1 မှတဆင့်အဆင့်များ2နှင့်0အတူတူပင်။
«diskutil appleRAID Mirror ဖန်တီးသည်။ [RAID 1 သို့ကျွန်ုပ်တို့ပေးလိုသောအမည်] JHFS + disk0 disk1«
အပို OWC pack တစ်ခုနှင့် SATA adapter ပါသော SSD ၀ ယ်နိုင်သည်။ ဤ adapter က ၂.၅ လက်မ SATA disk ကို install လုပ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ၎င်းကို USB 3.0 မှတဆင့်ချိတ်ဆက်ပါထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် SSHD ကို Main Disk (သို့) Data Doubler ဖြင့်ဖန်တီးထားသော FusionDrive အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ ၎င်းကို Time Machine အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်၊ ၎င်းတွင် OS X backup ကော်ပီများကိုအလိုအလျောက်ဖန်တီးနိုင်သည်။ တစ်အိမ်လျှင်ပိုလျှံ2လက်မ HDD ကို) ။
OWC ပူးတွဲ Drive
သင်၏ Mac သည်အလွယ်တကူရေနစ်နိုင်သလား။ အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အချိန်
အကယ်၍ သင်သည် application နှစ်ခုကိုဖွင့်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏ Mac သည်ရေနစ်သွားပါက RAM ကိုအဆင့်မြှင့်ရန်အချိန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်မလုံလောက်ခြင်း (သို့) SSD သည် multitasking များကိုကောင်းစွာကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်စနစ်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
ယခင်ဖြစ်ရပ်၌ရှိသကဲ့သို့ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်သည်ထုတ်လုပ်သူနှစ် ဦး ကိုသာအကြံပေးသည် (တစ်ခုချင်းစီသည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များကို၎င်းတို့ထံညွှန်ကြားထားသည့်အများပြည်သူအပေါ်အခြေခံသည်။ )
ဂိမ်းကစားသူများအတွက် Corsair, ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းနာများနှင့်ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ရေး။
OWC အင်တာနက်ကိုသုံးသောအသုံးပြုသူများအတွက်ရုံးအလိုအလျှောက်အသုံးပြုပါ။ သို့မဟုတ် developer များဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင်ရွေးချယ်စရာများနည်းပါးသည်။ ယခင်အပိုင်း၌များများစားစားမရှိပါ။ ယနေ့မည်သည့် RAM ပမာဏသည်ရေရှည်မတည်မြဲနိုင်ကြောင်းလေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
သင့်တွင် 2GB RAM ရှိလျှင် Fatal, အကယ်၍ သင့် Mac ကခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်သင်ဟာ RAM ကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲရမယ်။ RAM မရှိခြင်းကို 8GB တပ်ဆင်ဖို့သတိထားရမှာပါ။ ဒါပေမယ့်အကယ်လို့သင်၏ Mac ကသာ4ကိုခွင့်ပြုလျှင်4ကို install လုပ်ပါကတိုးတက်မှုကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ RAM ပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့် application များသည် system ကိုမနစ်နာစေဘဲအတူတကွအလုပ်လုပ်ပုံကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။
သင့်တွင် 4GB ရှိပါက: ပိုကောင်းပေမယ့်လည်းထပ်တူထပ်မျှဆိုးတာကကျွန်တော်တို့ဟာအရင်အခြေအနေတွေမှာရှိနေတယ်။ 8GB ဟာသင်စတင်သင့်တဲ့အခြေခံဖြစ်တယ်။ အကယ်၍ သင်၏ Mac ကခွင့်ပြုလျှင် RAM 8GB တပ်ဆင်ထားလျှင်၊ သင်ထိန်းချုပ်မှုကိုမဆုံးရှုံးစေဘဲသင်လိုချင်သည့် app များစွာကိုသင်လည်ပတ်နိုင်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါ၏စနစ်၏။
ထို့အပြင် Macs များစွာနှင့်အတူလာသည်ဟုထင်ကြသည် Integrated GPU များဒီဂရပ်ဖစ်ကဒ်တွေဟာတစ်ခြားစကားလုံးတွေအားလုံးကိုသုံးထားတဲ့မှတ်ဥာဏ်ကိုသုံးတယ်၊ RAM မှတ်ဉာဏ်ကိုသိမ်းထားတယ် သူတို့အတွက်တော့ဒီအချက်ကိုသိခြင်းကအချက်နှစ်ချက်ကိုငါတို့ကောက်နိုင်တယ်။ ပထမတစ်ခုမှာ 4GB RAM နှင့် GPU တစ်ခုရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အတွက် 3GB ကျန်လိမ့်မည်။ ဒုတိယမှာမျှဝေခြင်းဖြင့်ဗီဒီယိုမှတ်ဉာဏ်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်၊ အကယ်၍ သင် RAM ကိုတိုးမြှင့်ပါကဖြစ်နိုင်သည်။ GPU ကလည်းယူထားသည် ပိုကြီးတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်ဉာဏ်သင်၏ဗွီဒီယိုဂိမ်းများ၊ ဗီဒီယိုများနှင့်ဓာတ်ပုံများနှင့်သင်၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်စေလိမ့်မည်။
သင့်တွင် 8GB ရှိပါက: ကောင်းပြီ၊ ၎င်းသည်ကွန်ပျူတာတိုင်း၌ရှိသင့်သောအခြေခံ RAM ပမာဏ၊ ကစားရန်အတွက် RAM အလုံအလောက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် GPU သည်မှတ်ဉာဏ်ချေးသည့်အခါပaိပက္ခမဖြစ်စေရန်နှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများသည်စနစ်ကိုနစ်မွန်းစေဘဲအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုတည်းဖြတ်လိုပါက 12 သို့မဟုတ် 16 GB အထိအဆင့်မြှင့်တင်ရန်စဉ်းစားသင့်သည်။
သင့်မှာ 12 သို့မဟုတ် 16GB ရှိမယ်ဆိုရင် - ပြီးပြည့်စုံသောမှတ်ဉာဏ်ပမာဏ၊ ၎င်းပမာဏသည်စနစ်မည်သည့်အခါမျှရေနစ်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် RAM ရရှိနိုင်ပါသည်။ OS X ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုအသုံးပြုရန်အတွက် ဖိုင် cache ကိုဖန်တီးပါ, ၎င်းသည်အသုံးအများဆုံးဖိုင်များကို RAM သို့ကူးယူစေပြီး၊ နောက်တစ်ခါဖွင့်သောအခါချက်ချင်းဖွင့်နိုင်သည်၊ အသုံးချပရိုဂရမ်များအားလုံးကိုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မှတ်ဉာဏ်အားလုံးကိုမသုံးနိုင်ပေ။ ကျွန်ုပ်တွင် 16GB နှင့် MacBook တို့ရှိသည်။ 10GB ကိုအကူအညီမပါဘဲဘယ်တော့မှမသုံးစွဲပါ။
ဘယ်လိုအကူအညီမျိုးလဲ။ ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြမှာပါ။ ကောင်းပြီ၊ ဒါကအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဥပမာ RAM တွေအများကြီးရှိလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စမ်းသပ်မှုတွေမှာလုပ်နိုင်တယ်။ Parallels ကိုအသုံးပြု Windows ကို RAM 6GB သတ်မှတ်လို့ရတယ် OS X ရော Windows ရောပါတပြိုင်နက်တည်းလည်ပတ်နိုင်အောင်တစ်ချိန်တည်းမှာ run နိုင်ရင် app ကိုသုံးနိုင်ပါပြီ iRamDisk ကို RAM ဖြင့်ဖန်တီးရန် (System ကိုပိတ်ထားသည့်အခါတိုင်း RAM ကိုဖျက်ပစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သိုလှောင်ထားသည့်အရာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သတိထားရမည်ဖြစ်သည်)၊ ထို disk များပေါ်တွင် Safari cache ကိုပင်သိမ်းဆည်းပြီး 2.500MB / s ကျော်သောဤအချက်အလက်များကိုရယူနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဂိမ်းကစားသူတစ်ယောက်နှင့် MacBook Pro ရှိပါက၎င်းကို desktop ကွန်ပျူတာသို့ပြောင်းလိုက်သည်မဟုတ်လား။
MacBook Pros သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဟာ့ဒ်ဝဲကိုအသုံးပြုသည်။ ၂၀၁၁ နှင့် ၂၀၁၂ မော်ဒယ်များကိုပင်ပြောစရာများစွာရှိသေးသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်၌အိမ်တစ်လုံးဆောက်လုပ်ရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အသံလွှင့်ဌာန / မီဒီယာစင်တာဖွင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ MacBook Pro ကိုအာရုံကြောစင်တာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုရန်၊ အိမ်နှင့်ဝေးဝေး၌နှစ်သိမ့်မှုအပြည့်အဝပေးသောကိရိယာဖြစ်သည်။
Thunderbolt HDMI ကေဘယ်လ်ကြိုး
OS X နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမည့်ပရိုဂရမ်ငယ်လေးများ၊ Mac ၌ရှိသောမည်သည့်အရာကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်အစေခံသည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုယခုလာသည်။
ဤသေးငယ်သောပရိုဂရမ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စနစ်၏လျှို့ဝှက်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအသက်သွင်း / ပိတ်ခြင်း၊ ကွန်ပျူတာကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်း၊ ဥပမာအားဖြင့် Mac ၏စိတ်ရှုပ်စေသော startup အသံအားပိတ်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည့်ဆက်တင်များနှင့်အတူ fiddling ကိုအသုံးပြုထားသည်။
2. Qihoo 360 လုံခြုံရေး
OS X စနစ်သည်အလွန်လုံခြုံသည်၊ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အက်ပလီကေးရှင်းများကို“ Mac AppStore” ကိုသာကန့်သတ်ထားသည်ဆိုပါကသေချာသည်၊ အွန်လိုင်း Malware ကိုကျွန်ုပ်တို့မတွေ့ရှိနိုင်ပါ၊ antivirus သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးမဟာမိတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည် Safari (သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောမည်သည့် browser) တွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေခြင်းကိုကာကွယ်လိမ့်မည် အွန်လိုင်း Shield ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်အတွက်မည်သည့်အန္တရာယ်ရှိသည့်ပရိုဂရမ်ကိုမဆိုပျက်ပြယ်စေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အဖိုးတန်အရင်းအမြစ်များကိုခိုးယူခြင်းမပြုဘဲသေချာစေရန်လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။
၎င်းတွင် configuration checker မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်လဲ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်သိရလိမ့်မည်၊ ၎င်းတို့ကိုဖယ်ရှားရန်ခွင့်ပြုမည့် application manager နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ cache များနှင့်အခြားသော့နေရာများကိုသန့်ရှင်းအောင်ထားသည့်အမှိုက်သန့်ရှင်းရေးစက်ကိုတောင်နှေးနှေးသောကွန်ပျူတာနှင့်သိမ်းဆည်းရန်နေရာမရှိစေရန်ရှောင်ရှားနိုင်သည်။
၃။ Disk Sensei
ကျွန်ုပ်တို့၏ disk များကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင်ပျောက်ဆုံးမနေသင့်သောအသုံး ၀ င်မှုတစ်ခုကကျွန်ုပ်တို့၏ hard-drive ပေါ်တွင်သူတို့၏အခြေအနေနှင့်ကျန်းမာရေးကိုစစ်ဆေးရန်၊ အပူချိန်နှင့်ကွဲပြားသောအစီရင်ခံစာများကိုကြည့်ရှုရန်၊ တက်ကြွနှင့်ချွတ်ချုံ့ (အကယ်၍ သင် Mac တွင် SSD ထည့်သွင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်၊ အကယ်၍ ၎င်းသည် OS X El Capitan မှမိတ်ဆက်ထားသောဇာတိနည်းကိုသုံးသောအခါအမှန်အားဖြင့်၊ ဤအသုံးအဆောင်သည်မဖြစ်မနေ) ။
ဒေတာဆုံးရှုံးမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည့် hard disk ကိုရပ်တန့်ရန်တာ ၀ န်ရှိသောအာရုံခံကိရိယာဖြစ်သော SSDs များတပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့် SSD များမှစွမ်းအင်ဖြုန်းတီးခြင်းကဲ့သို့သောစွမ်းဆောင်ရည်များဖြစ်သောစွမ်းဆောင်ရည်များကိုလည်းလုပ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ပိတ်ထားနိုင်သည်။ မိုဘိုင်းစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းတွေရှိရင်ဒီပြproblemနာကမခံစားရဘူး
၎င်းတွင်သော့ခတ်တည်နေရာသန့်ရှင်းရေးစနစ်နှင့် disk တစ်ခုစီ၏ဖတ် / ရေးအမြန်နှုန်းကိုစစ်ဆေးခွင့်ပြုသည့်အခြေခံစံနှုန်းများလည်းပါ ၀ င်သည်။
မည်သည့် application ကိုမဆို၎င်းနှင့်၎င်းစနစ်နှင့်အတူစွန့်ပစ်ထားသည့်အမှိုက်သရိုက်များအားလုံးကိုဖယ်ရှားရန်ခွင့်ပြုမည့်သေးငယ်သော free utility ။
အရာအားလုံးပါဝင်သည့်အခမဲ့သန့်ရှင်းရေးအစုံ၊ cache သန့်ရှင်းရေး၊ ထပ်ဆင့်ဖိုင်ရှာဖွေမှု၊ ဖိုင်ကြည့်ရှုသူကြီးများ၊ binary cutter၊ language cleaner နှင့်အခြားအသုံးအဆောင်များပါဝင်သည်။
တိုတောင်းခုနှစ်, Clean My Mac အတွက်အခမဲ့အစားထိုးခြင်း။
သို့သော်ဆော့ (ဖ်) ဝဲအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာကိုသန့်ရှင်းစေရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ရည်ရွယ်သည်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများကိုတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်သည့်အညီအမျှသို့မဟုတ် ပို၍ ပင်အရေးကြီးသောအခြားအသုံးအဆောင်များရှိပါသည်။
မဖြစ်နိုင်ဘူး, ငါ Boom2နှင့်သင်ကြုံတွေ့ရမည့်အပြောင်းအလဲကိုစကားလုံးများဖြင့်ဖော်ပြရန်ခက်ခဲသည်။ ၎င်းသည်သင်၏အသံထွက်ရှိမှုကိုရှာဖွေရန်သင်၏ကွန်ပျူတာသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သေးငယ်သည့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းကိုတွေ့ရှိသည်နှင့် နောက်တာပါ သင်၏စက်ကိရိယာများ၏အသံအတွေ့အကြုံကိုထာဝရပြောင်းလဲလိမ့်မည်.
ဤကိရိယာသည်သင်၏ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အသံပေါ် မူတည်၍ စိတ်ကြိုက်ညီမျှသောပရိုဖိုင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။ သင်ကြိုးစားပြီးသည်နှင့်ပြန်သွားတော့မည်မဟုတ် (ဗွီဒီယိုမတိုင်ခင်နှင့်အပြီးကူးယူရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ဖြုတ်လိုက်ရင်မင်းရဲ့စပီကာတွေအလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ခံစားရမှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်း Mac မှာရှိတဲ့အသံကဖြစ်သွားတာကိုသင်တွေ့နိုင်တယ် သင် Boom2ကို install လုပ်သည့်အခါသာမန်အဆင့်မှသူတော်ကောင်းတရားအထိဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်သင်၏ Mac ၏အသံကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်၎င်း၏ဆော့ဖ်ဝဲအသံချဲ့စက်ဖြင့်၎င်းကိုမြှင့်တင်ရန်လည်းခွင့်ပြုပေးသည်။ သင်သည်အသံအတိုးအကျယ်ကိုတောင်ပြောင်းနိုင်သည်။အသံနှင့်ပတ်သက်သောတောင်းဆိုမှုများအများဆုံးဖြစ်လျှင်၊ Ambience ကဲ့သို့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများပါ ၀ င်သည်၊ အသံများမပါရှိသည့်အခါ၊ ဤလုပ်ဆောင်မှုကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအသံ၊ အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များရှိသည်။ “ High Fidelity”,“ Spatial”,“ Night Mode” နှင့်“ Pitch” တို့ဖြစ်သည်။ ၁၅ ရက်ကြာရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းခံရသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏နေရာတွင်စမ်းသပ်ပြီးလိုင်စင်အတွက်အစုစုကိုပြင်ဆင်မည်ဖြစ်သည်။ Boom 15 မပါဘဲသင်၏ Mac ကိုထပ်မံကြည့်ရှုနိုင်မည်။
မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောပရိသတ်များရှိနေသရွေ့၊ Mac များအတွက်အခြားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအသုံးချမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ နွေရာသီတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းများသည်အများဆုံးခံရသည့်အခါ၊ အထူးသဖြင့်သူတို့၏ဂရပ်ဖစ်များကိုအထူးအသုံးပြုပါကရံဖန်ရံခါဂိမ်းကစားသူများသည်ကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည့်အရာကိုသိလိမ့်မည်။ ဂိမ်းတစ်ခုဖွင့်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac သည်ပူလာသည် (dramatization) ဖြစ်လာသည်။ တူညီတဲ့အကြောင်းပြချက်များအတွက် program ကို အပူချိန်ကိုထိန်းညှိပြီးအအေးပေးစနစ်ကိုထိန်းညှိပေးသည် ပေါ်မူတည်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
Macs Fan Control နှင့်သင်အပူချိန်ကိုလျှော့ချရန်ကိရိယာ၏ပန်ကာများကိုအရှိန်မြှင့်ပေးမည့်အချက်အချို့ကိုသင်တည်ဆောက်နိုင်လိမ့်မည်။ ထိုအချက်များသည်အချို့သောအာရုံခံကိရိယာများ၏အပူချိန်ကိုအခြေခံသည်။ ငါဒီလိုလုပ်ဖို့အကြံပေးတယ် -
သင်မှန်လျှင် ကပေးသူအသုံးပြုသူများ ဗွီဒီယိုဂိမ်းများ၊ ဗွီဒီယိုနှင့်ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းများအတွက် GPU ကုန်ကျစရိတ်ကိုအခြေခံစံနှုန်းအဖြစ် သတ်မှတ်၍ ၅၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်ကျော်လွန်ပါကပန်ကာကိုအရှိန်မြှင့်တင်ပါ၊ ၎င်းသည် ၇၀ သို့မဟုတ် ၇၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရောက်ရှိပါကအများဆုံးအထိသွားသည်။
အကယ်၍ သင်သည်အခြားတစ်ဖက်တွင်ရုံးအပလီကေးရှင်းများကိုအသုံးပြုသောအသုံးပြုသူများဖြစ်လျှင်အင်တာနက်သို့မဟုတ်အခြားအသုံးအဆောင်အမျိုးအစားများကိုလှန်လှောရှာဖွေပါ GPU ကိုမလိုအပ်ပါဘူး CPU သည် Turbo Boost သို့ ၀ င်သောအခါအလွန်အမင်းပူနွေးလာသည်နှင့်အပူချိန်တိုးလာသည်နှင့် Macs Fan Control သည် Air ကိုကောင်းမွန်စွာပေးအပ်ရန်ဂရုပြုလိမ့်မည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်၏ CPU ကိုရည်ညွှန်းသည့်အရာ၊ အဓိက ၁ အဖြစ်သတ်မှတ်ရန်သင့်ကိုအကြံပေးလိုသည်။ တည်ငြိမ်မှုမရှိခြင်း (သို့) စနစ်ပြproblemsနာများမဖြစ်စေရန်သင်အလိုအပ်ဆုံးအချိန်တွင်ပေါက်ကွဲနိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဒီ utility ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သနည်း အကယ်၍ ချစ်ပ်သည်အရေးပါသောအပူချိန်သို့ရောက်ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏အစိတ်အပိုင်းများ၏အပူချိန်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တည်ငြိမ်မှုအတွက်အဓိကအချက်ဖြစ်သည် နောက်ကြောင်းပြန်မလှည်ဟာ့ဒ်ဝဲကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ် အကယ်၍ ချစ်ပ်သည်အမြဲတမ်းအပူချိန်မြင့်မားပါကကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိရိယာများသည်၎င်းသည်အပူချိန်ကိုလျှော့ချရန်နှင့်အပူချိန်ကိုလျှော့ချရန်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စနစ်တည်ငြိမ်မှုကိုအကြိမ်များစွာဖြစ်စေသောကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းကိရိယာများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
¿ငါဘာကြောင့် Macs Fan Control ကိုအကြံပြုရတာလဲ TG Pro လား၊ SMC Control လား။ အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်၊ ၎င်းကိုစတင်ရန်အခမဲ့အသုံးချမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်အားလုံးမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးအသုံး ၀ င်လွယ်ကူသော interface ရှိကြောင်းသက်သေပြခဲ့ပြီး၎င်းတွင် Windows အတွက်အသုံးပြုသူထည့်သွင်းထားသည့်ဗားရှင်းတစ်ခုလည်းရှိသည်။ OS X နှင့် Boot Camp နှစ်ခုစလုံးရှိသည် အပူချိန်ကိုထိန်းညှိပေးပြီးသက်တမ်းရှည်စေပြီးကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိစေသည့်တူညီသောစွမ်းရည်သည်သင်၏ရိုးရှင်းစွာရိုးရိုးသားသားဆိုရလျှင်၊ Mac ပေါ်တွင် Windows အအေးပေးမှုသည်အလွန်ဆိုးရွားသည်။ Boot Camp တွင်ပန်ကာများသည်မြင့်မားသောအပူချိန်မရောက်မချင်းမဖွင့်ပုံရသည်။ ၎င်းသည်အနှောင့်အယှက်ပေးရုံသာမကကိရိယာများအတွက်လည်းအန္တရာယ်ရှိသည်။
ငါအရင်ကဒီ utility အကြောင်းပြောပြီးပြီ။ အဲဒါနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဟာ RAM memory ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသုံးပြီး virtual disks တွေကိုဖန်တီးနိုင်တယ်၊ ဒီ utility ကိုသုံးဖို့ငါတို့မှာသေချာတာပေါ့။ အနည်းဆုံး RAM ၏ 8 GB ကိုဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကျွန်ုပ်တို့ system ထဲမှပျောက်နေသော RAM ကိုဖယ်ရှားလိမ့်မည်။
iRamDisk ကို သုံး၍ ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနိုင်သည် Safari cache ကိုရည်စူးထားသော drive တစ်ခု (အပလီကေးရှင်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြင့်တင်ပြခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခု)၊ ၎င်းနှင့်ပါက cache ကိုပိုမိုမြန်ဆန်သောအမြန်နှုန်းရှိခြင်းဖြင့်သွားလာမှုအမြန်နှုန်းရှိလိမ့်မည်။ ဤသိုလှောင်ခန်းကိုဖျက်ပစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ပူစရာမလိုပါ မကြာခဏဆိုသလို RAM သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းကိရိယာများကိုပိတ်တိုင်းအချိန်ကုန်သွားသည်။
ဤအက်ပလီကေးရှင်း၏နောက်ထပ်အသုံးဝင်မှုတစ်ခုမှာပါဝါဖြစ်သည် သတ်သတ်မှတ်မှတ်အက်ပ်တစ်ခုကိုသိမ်းဆည်းရန် disk များဖန်တီးပါဤအပလီကေးရှင်းသည်အခြားသူများထက်ပိုမိုမြန်ဆန်သောအမြန်နှုန်းကိုခံစားနိုင်ပြီး၎င်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အလုပ်လုပ်နိုင်ခွင့်ပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Final Cut Pro စာကြည့်တိုက်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့တည်းဖြတ်မည့်ဓာတ်ပုံများဖြစ်သော Xcode စီမံကိန်းများသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများကိုသိမ်းဆည်းရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သတိထား: ငါဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းသတိရပါ ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်ငွေပေးချေသည့်အခါမှတ်ဉာဏ်ပျောက်သွားလိမ့်မည်အကယ်၍ သင်သည်ဤ disk များ၌အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုခုကိုသိမ်းဆည်းထားမည်ဆိုပါက၊ စနစ်အားပိတ်ထားသည့်အခါဒေတာများကို၎င်းတို့အားမဆုံးရှုံးစေရန်အတွက် "Makeabackup" အကွက်ကိုအမှန်ခြစ်ပေးပါ။ ထို့အပြင် "Create at startup" ကိုလည်းမှတ်သားနိုင်သည်။ "ဤနည်းအားဖြင့် disk ကိုကွန်ပျူတာ၏အစဖြင့်ဖန်တီးလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုလိုသောအခါတိုင်းထပ်ခါတလဲလဲလုပ်စရာမလိုပါ။
စာရေးသူနှင့်ဤအချက်အလက်များကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းထားရန်လိုအပ်သောအခြားသူများအတွက်ကောင်းမွန်သောကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားသမိုင်းရှိလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချိန်တည်းမှာအရာ ၁၀၀ သို့မဟုတ်ထိုထက်မကကို clipboard မှာကူးယူနိုင်တယ် ကျွန်ုပ်တို့ paste လုပ်လိုသောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုရွေးချင်တိုင်း၎င်းတွင် link များ၊ စာသားများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဖိုင်များနှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်အတွက်ဤလျှောက်လွှာတွင်စည်းမျဉ်းများပါ ၀ င်သည် 1Password, LastPass သို့မဟုတ် iCloud Keychain ကဲ့သို့အပလီကေးရှင်းများမှထုတ်ယူထားသောဒေတာများကိုမကူးပါနှင့်ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ clipboard ကို ၀ င်ရောက်နေသူမည်သူမဆိုအရေးကြီးသောစကားဝှက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကူးယူခဲ့ဖူးလားမမြင်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ဖယ်ထုတ်ထားသည့်စာရင်းထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည့်တည်နေရာများသို့မဟုတ် application များကိုထည့်နိုင်သည်။
လျှို့ဝှက်စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများ၊ ငွေတောင်းခံလွှာများစသဖြင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖိုင်များပါ ၀ င်သောစာဝှက်ဖြင့်ပို့သောစည်ကို Hider2ဖြင့်ဖန်တီးနိုင်သည်။ Application Hider2နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့်စကားဝှက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းများနှင့်သို့မဟုတ် status bar တွင်ရှိနေပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအချိန်တိုင်းမှတ်စုများသို့မဟုတ်ဖိုင်များထည့်သွင်းမည့်လက်ထောက်နှင့်အတူအလိုအလျောက်ပင်စည်ကိုဖွင့ ်၍ ပိတ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အများစုကိုမသိနားမလည်သောအရာများမှရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
CrossOver နဲ့လုပ်နိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကို virtual machine ကို install ကျွန်တော်တို့ကိုရှောင်ကြဉ်ပါ Windows သို့မဟုတ် Boot Camp ပင်နှင့်ကိုက်ညီသော Windows applications များ "natively" ကိုသုံးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများ (သို့မဟုတ်ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုပြုလုပ်စဉ်ကအလွန်အစွန်းရောက်သောကြောင့်) မလိုအပ်သောဗီဒီယိုဂိမ်းများသို့မဟုတ်အခြားဆော့ဖ်ဝဲများဖြစ်သည်။ Windows တွင်သုံးသည်သို့မဟုတ် OS X တွင်ကျွန်ုပ်တို့မလိုအပ်သောအသုံးအဆောင်တစ်ခုကိုသုံးရန်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » Mac အတွက်အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည် - ပြတ်သားတဲ့လမ်းညွှန်
RAID1 သည် read speed ကိုနှစ်ဆတိုးစေသည်။ ဒီ discs နှစ်ခုစလုံးကအတူတူပဲ၊ ဒါကြောင့်သူတို့ထဲကတစ်ခုရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုဖတ်နေစဉ်၊ အခြား disc ပေါ်ရှိဖိုင်ရဲ့အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုသင်ဖတ်နေတယ်။
ဂရိတ် post ကိုဂုဏ်ပြုလွှာ။ သူတို့ကိုစမ်းသပ်ဖို့ disk ကို sensei နှင့်စန်း2ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့သည်
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ ကူညီရတာဝမ်းသာပါတယ်၊ လျှောက်လွှာနှစ်ခုလုံးကိုသင်နှစ်သက်မှာသေချာပါတယ်။
ပို့စ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော့်ကိုမက်ဒရစ်မြို့ကယုံကြည်စိတ်ချရသောစတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုသူတို့ကဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုခုကိုလုပ်ပေးနိုင်မလား။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
ကြောက်မက်ဘွယ်သော post တစ်ခု !!! ဒီအလုပ်တွေကိုငါတကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးမယ့်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရမ်းကြိုးစားတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာယူရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသော SSD ကိုကြည့်လျှင် 240gb ၏ Corsair XT ကိုသင်မည်သို့မြင်သနည်း။
ပို့စ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကောင်းပါတယ် မင်းတို့ငါ့ကိုမက်ဒရစ်ရှိယုံကြည်စိတ်ချရသောစတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုပြောပြပေးပါ။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုသင်အဆိုပြုထားသောတိုးတက်မှုအချို့ကိုလုပ်ပေးမည်လား။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
ငါနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုထည့်ပါ။ ဘယ်လို OWC ၏စာမျက်နှာနှင့်အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သနည်း သူတို့ရောက်ရင်အကောက်ခွန်ပေးဆောင်ရမလား။ သို့ဆိုလျှင်မည်မျှရှိသနည်း။ ၂၁% VAT?
မင်္ဂလာပါကားလို့စ်၊ သင်၏ခြေစစ်ပွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ^^ အလွန်ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။
OWC နှင့် Corsair နှစ်ခုစလုံးတွင်အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များရှိသည်။ ကွဲပြားခြားနားမှုများသည် ပို၍ သိမ်မွေ့သောအရာများဖြစ်သည်။ ဥပမာသင်၏ Mac တွင် Boot Camp ကိုအသုံးပြုလိုပါက (ဂိမ်းများသည် Windows တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်) Corsair သည် ၀ င်းဒိုးတွင်တရားဝင်ကိရိယာများရှိသည်။ သင်၏ဆော့ဝဲလ်များအတွက် OSX ကိုသာအသုံးပြုပါကအကောင်းဆုံးမှာ OWC ဖြစ်သည်။ သူတို့စတင်တည်ထောင်ချိန် မှစ၍ Mac ကိုရည်စူးပြီးထိုနယ်ပယ်မှကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်လျှင်သူတို့၏ SSD တွင်အာရုံခံကိရိယာများပိုမိုထည့်သွင်းထားပြီးစနစ်လည်းရှိသည်။ ကိုယ်ပိုင်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း TRIM စတိုင်သည်၎င်းကိုဇာတိအားဖြင့်သက်ဝင်လှုပ်ရှားနိုင်ခြင်းမရှိခြင်း (သတိပြုပါ၊ အယ်လ် Capitan တွင်ဖြစ်နိုင်လျှင် TRIM ကိုဖြစ်နိုင်သမျှသုံးရန်အကြံပြုသည်၊ ၎င်းသည်သင်၏ SSD useful ၏အသုံး ၀ င်သောသက်တမ်းကိုတိုးစေလိမ့်မည်) ဖြစ်သောကြောင့်တူညီသောအမြန်နှုန်းကိုရရှိပြီး၊ အလားတူစျေးနှုန်းအကွာအဝေး, ရွေးချယ်မှုသင်ပေးမယ့်အသုံးပြုမှုပေါ်မူတည်သည်။
အကောက်ခွန်နှင့် ပတ်သက်၍၊ အကယ်၍ သင်သည် OWC ၀ က်ဘ်ဆိုက် (macsales) တွင်အကောက်ခွန်ကောက်ခံမှုများပါ ၀ င်ပါကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး သည်ယူရို ၂၃၀ ကို ၀ ယ်ယူပြီးယူရို ၈၅ အခွန်ပေးဆောင်သည်။ သို့သော် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အခြားဖြန့်ချိသူများထက်အပိုပစ္စည်းများနှင့်အထုပ်များကိုပိုမိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာတွေ့ရလိမ့်မည်။ OWC ကိုရောင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်ကြောင့်အကောက်ခွန်ပေးဆောင်ရင်သင့်အတွက်တွက်ချက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်၊ Amazon.com ^^ မှာသူတို့ထုတ်ကုန်တွေကိုအမြဲရှာနိုင်တယ်
ဂျွန်ကောင်း၊ အမှန်တရားကတော့ဒီ post ကငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်။ အလွန်ကောင်းစွာအရာအားလုံးကိုရှင်းပြ;;) ။
ငါပုံမှန်အသုံးပြုရန်ပိုမိုအသုံးပြုမည်၊ အချို့ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများဖြစ်သော်လည်းအခြားနည်းနည်းသာရှိသည်။ ငါ OWC ကိုကြည့်နေပြီးအဲဒီမှာ ၀ ယ်တာကပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်။ အကောက်ခွန်တွေတောင်ဈေးချိုတယ်၊ ငါတွေ့တဲ့ပြtheနာကအာမခံချက်ပဲ။
နောက်ဆုံးတော့ငါတော်တော်ကြည့်နေတဲ့ Samsung Evo 850 240gb ကို ၀ ယ်ဖို့ငါရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ အရင်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်က ၀ ယ်ခဲ့တဲ့ ၉၅ ဒေါ်လာနဲ့ laptop ဟောင်းတစ်လုံးအတွက်ငါဝယ်လိုက်ပြီ။ ဒါကအဆင်ပြေနေပြီ၊ ပြီးတော့ယူရို ၈၀ နဲ့ရောင်းတော့ဒါငါရတယ်။
ဒီထက်ပိုပြီးဖြုန်းတီးခြင်းအားဖြင့်လည်း CD player ကိုပြောင်းရန်အိတ်ကို ၀ ယ်လိုက်ပြီးမူလ hdd နှင့်စာဖတ်သူကိုပြင်ပအိတ်ထဲထည့်လိုက်သည်။
နောက်ဆုံးတော့နောက်လမှာ memory ကို 16GB အထိချဲ့ပြီးလက်ပ်တော့ကောင်းကောင်းပြင်ဆင်ထားမယ်။
Hard disk သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်သော်လည်းပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ပြီးဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်နှင့် memory နှင့် casing တို့ကိုပြုလုပ်သည်။ နောက်မှ ssd ကိုဖျက်လိုက်ရင်ငါဟာ Occ (သို့) corsair ကိုသွားမယ်။
PS: ကျွန်ုပ်တွင် ssd ရှိပြီးဖြစ်သည်။ အံ့ wonderful စရာကောင်းသည်။ ယခုတနင်္ဂနွေတွင်ကျွန်ုပ် cd ယူနစ်ကိုစတင်ပြောင်းလဲချိန်ရှိသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ယူရို ၁၅၀ ထက်ပိုသောတန်ဖိုးကိုမဝယ်ပါကအကောက်ခွန်ကောက်ခံခြင်းမဖွင့်လျှင်၊ နည်းပညာအသစ်များမှ ၃.၅ မှ ၂.၅ adapter နှင့်ကျွန်ုပ်၏ iMac ကိုဖွင့်ရန်ကိရိယာများကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ စပိန်တွင်ကျွန်ုပ်ဝယ်ယူလိုက်သောတစ်ခုတည်းသော Samsung SSD နှင့် tera နဲ့ကျွန်တော် iMac ၏ HDD ကို tera တစ်ခုမှဖယ်ရှားလိုက်သော်လည်း Raid 150 ထားရန်နှင့် Tera မှအခြား SSD ကို super drive bay ရှိ OWC data doubler နှင့်ထားရန်စီစဉ်ထားသည်။
Matthias Gandolfo ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းတဲ့ post …ငါ mac mini 2014 ကို ၀ ယ်လိုက်ပြီ။ သူ့မှာ gigs ram 8 ရှိတယ်။ ငါမသိဘူး။ မ ၀ ယ်တော့လည်းမပြောနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ ssd တစ်ခုထည့်ပြီးပျံတယ် ... မယုံနိုင်စရာပါပဲ။ မှတ်ဉာဏ်အသုံးပြုမှုကိုတိုးတက်စေရန် (သို့) ကျွန်ုပ်မြန်သောမှတ်ဉာဏ်ကုန်သွားအောင်လုပ်ရန်လှည့်ကွက်တစ်ခုရှိပါသလား။
Matias Gandolfo အားပြန်ပြောပါ
Memory Optimizer (သို့) ဒီလိုပရိုဂရမ်ကိုသုံးပြီးသင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံလည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက် 8GB လောက်လိုအပ်ပေမယ့် memory ပြည့်နေရင် memory ကိုလွတ်မြောက်အောင်ကူညီနိူင်ပါတယ်။
ဒီမှာ Capitan မှာရှိနေပြီး RAID မလုပ်နိုင်သူတွေကတော့ငါလုပ်ခဲ့တဲ့ဗွီဒီယိုတစ်ခုပါ။ သူတို့က Yosemite's Disk Utility ကိုပြန်လည်ရယူနိုင်မယ်ဆိုရင် RAID ရွေးစရာရှိရင် https://youtu.be/ThPnpLs3pyA
Javier Escartín ဟုသူကပြောသည်
ဟွမ်၊ ပို့စ်ကအရမ်းကောင်းတယ်၊ ငါဒီကိုရောက်ပြီးအရမ်းဆောင်းပါးကောင်းတယ်။ ဤမျှနည်းနည်းအရပ်ဌာန၌မည်မျှအကူအညီ။ ကောင်းပြီ၊ မင်းရဲ့အကြံပေးချက်တွေကိုစောင့်နေပါလိမ့်မယ်။
Javier Escartin အားပြန်ပြောပါ
အထူးသဖြင့်ပရိသတ်များအသုံးပြုခြင်းသည်အပူချိန်ကို ၅% လျှော့ချပေးသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အလွန်ကောင်းသော post, ငါ "နှောင့်အယှက်" startup အသံအပေါ်သဘောမတူပေမယ့်, pram reset ရန်လိုအပ်ပါသည်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာအကြောင်းကြား
Ricardo Inda ကိုပြန်ပြောပါ
OS X El Capitan တွင်သတိပေးချက်များကိုမည်မျှကြာအောင်ပြရမည်နည်း
Apple Touch ၏ Touch Table သည် 3D Touch ၏အလားအလာကိုပြသသည်